SODAANIS NI INJIFATAMA! – Beekan Guluma Erena
SODAANIS NI INJIFATAMA!	Beekan Guluma Erena
Politics Category, Uncategorized April 10, 2016siyaasumaam!	2 Comments
Wayyaanen irra irra yoo ilaalan waan tasgabbooftefi nagaa qabdu fakkaattus keessa keessa garuu wal dhabbiin hamaan keessatti uumamuun isaa dhagahamaa jira. Walgahiilen mormiin guutamaniifi kan walii galteen keessa hin jirre hamma ammaattis adeemsifamaa jiru. Yeroon barreeffama kana barreessaa jiru kanattis walgahiin jaraa hin xumuramne. Kanaan dura maqaan ABOfi Ginbot 7 gaaridhaan hin kaafamuu ture, amma garuu baramaa dhufeera. Aangawoonni TPLF Akka durii miseensota ofii ( kanneen akka OPDO, BIADEN, SNNPfi kanneen isaan deeggaran) dorsisurraa gara kadhachuutti gadi bu’aa jiru. Aangawoonni TPLF Rakkoo cimaa keessatti kufan kana jalaa bahuuf ciminaan hojjachaa jiru.
Kufaatii Wayyaanee wantootni eeran baay’edha. Fakkeenyaaf Hanni kompiitaroota mana maree federeshinii Etiyoophiyaa irratti adeemsifame waan akka salphaatti ilaalamuu miti. Naannon Oromiyaa OPDO harkaa fuudhamtee Homaa Waraanaa Saamooraa Yuunusiin gaggeeffamuun buluun dhimma guddaadha. Sababa rakkoo beelaa biyyattii mudate jedhuun Lammiileen Ameerikaa baay’inaan gara biyyattii seenaa jiraachun isaaniis waan dhokate of keessaa qaba. Qabsoon Oromiyaa keessatti eegale, qabbanaawurra darbee eddoo hunda fudhataa, naannolee biyyatti kanneen biroo keessattis babal’achaa dhufuun isaatis kufaatii TPLF Ifatti kan agarsiisaniifi wayyanen akka boba’aa xumurte ifatti kan addeessudha.
Kufaatin Wayyaanee dhihaatuu isaa waggoota hedduu dura barreeffamaa tureera. Har’as barreessaa jirra. Kunoo Wayyaanenis osoo hin kufin waggoota hedduu lakkoofsisnee jirra. Tilmaama keenyatu dogongore moo sababa biraattu jira? yoon gadi qabee yaaduu tilmaamni keenya dogongora natti hin fakkaatu. Mootummaa Wayyaanee dirqisiisuu yeroon itti dandahamu hedduun sababa
Qabsoon ummata Oromoo itti fufee jira. Qabsoon kuni awwaalamee ni hafa jedhanii tilmaamuu mannaa naannolee garagaraatti faffaca’ee biyyattii guutuu fudhachuu danda’a jechuutu irra salphata. Aangawonni wayyaanee dhugaa kana ifatti amanuu baatanis, bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hoomaa waraanaa Saamooraa Yuunusiin gaggeeffamutti kennuun isaanii dubbichi humna isaanii ol tahuu isaa agarsiisa. Homaa waraanaa Oromiyaa akka fedhetti sibiilan waxalee akka bulchuu namoota itti kennaman keessaa Jeneraalli Oromoo tokkoyyuu hin jiru. Sirna bulchiinsa Hailasillaasees tahee isa Dargii keessatti Ajaja Waraanaatin Oromoonni kan ittiin saalfataman hin turre. Hamma kennaa uumaa isaanii fakkaatutti Jeneraalummaan kan Oromootaa ture.
Taaddasaa birruu irraa kaasee haga Raggaasaa Jimaa; Quusii Dinagdee irraa haga Mar’id Niguse, Gabayyoo Gurmuu irraa haga Damissee Bultoo, Jaagamaa Keelloo irraa haga Abarraa Abbabaa darzana lamaa ol Jeneraalota dandeettii Waraanaa qaban waamun ni danda’ama. Har’a yeroon jijjiiramee jira. Saba bicuudhaan ala, kanneen biroo sadarkaa koloneelummaatii ol dabruu hin dandeenye. Miseensonni homaa waraanaa Saba Oromootifi Amaara tahan jarreen kaanneniif jala deemufi bassoo bulbulurra waan dabre hojjachuuf carraa hin arganne.
‘’Tokkoon tokkoon keessan waraanni amma gaggeessitan kuni dhimma dhuunfaa keessaniif tahuu isaa beekuu qabdu. Qabsoo ummata Oromoo kana fashaleessuu yoo hin dandeenne ta’e namni dura dursee balaan irra gahu nu mataa keenya. Ajaja Saamooraa kana fudhachuudhaan jarreen hirmaatanis gara sadarkaa gadiitti dabarsaniiru.’’
Saamooraan dhugaa isaa dubbate. Ummata Tigraay osoo hin tahin Aangawoonni TPLF balaa guddaatu isaan eeggata. Ummata hin eegnen waliin wal dhabuu mannaa waraana Taankiifi hidhannaa cimaa qabu waliin wal loluutu irra salphata. Wayyaanen sirna lolaa dur barateen lolaa hin jiru. Kan yoon jedhu waraanni amma gaggeeffamaa jiru sa’aatifii eddoo ummanni Oromoo barbaadetti gaggeeffamaa jira. Kuni Ummata Oromootif Milkiifi Injifannoo guddaadha. DHDUOn kufee Oromiyaan akka waraanan bultu dirqisiisun mataan isaa saba Oromootif Jagnummaafii injifannoo guddaadha. Wayyaanef immoo jalqaba xumura sirnichaati.
Siyaasni Wayyaanee kijibaafi ololaan guutamte har’arra geessee jirti. Adaduma ganni tokko dabree ganni biraa dhufuun waa’ee Midhaan nyaataan of danda’uu odeessun amala isaanii ture. Namichi Du’e sun ‘’ Wabii midhaan nyaataa keenna raggaasisuu irra dabree biyyoota alaatifis humna midhaan dhiheessuu ni dandeenya’’ jedhanii xinniquu isaanii dhageenyee turre. Kunoo akkuma argaa jirru, akkuma roobni dhaabateen waggaa tokkoofuu of dandahuuf midhaan of eeggannoof lafa kaayanne akka hin qabne ifatti mul’ateera. Biyya Afrikaa keessatti Qabeenya kuusaa bishaanitiin lammaffaa taate qabatanii yeroo hunda Kadhaa midhaanitiif adduunyaa dura dhaabachuun nama salfachiisuu qabaa ture. Garuu kadhaan itti baratee saalfatuu dhiisan. Qilleensarratti lafa daldaluu eegalanii akka mootummaatti waan godhuun irra ture irraanfatan.
Haala yeroo ammaa irraa hubatuun akka danda’amutti ‘’ Qabsoon Ummata Oromoo itti fufee jira’’ jechuurra ‘’ Qabsoon Ummata Etiyophiyaa itti fufee jira’’ sadarkaa jedhutti guddachaa jiraachun isaa ifatti mul’ataa jira. Fincila ummata Oromoorratti dabalatee Naanoo Amaaraa – Walqaayititti gaaffiin ummataa ‘’ Nuti Tigree Miti’’ jedhu akka itti fufetti jira. Yeroo dabre Gondar aanaa Daabaat keessatti finciltoonni Amaaraa daandii cufanii ooluun isaanii kan ifatti mul’ate ture. Gojjaam yeroodhaa gara yerootti dhippina lafaatin walqabatee komii qabu. Kaleessa barattoonni Yunivarsitii finfinnee ‘’ Nuti Shororkeessitoota Miti’’ jedhanii wayta gara Imbaasii Ameerikaa deeman tumaafii reebicha akkasumas hidhaatu isaan mudate. Naannoo kibbaa keessattii Saba Mursii; naannoo Hamariifi Sulula Oomootti ummataafi Poolisni walitti bu’uun isaanii dhagahameera. Poolisoonni ummata uffata sirnaan uffachuu hin eegalin haala akkam sukkaneessaa taheen akka morma isaanii walitti hidhanii deemanii turan miidiyaalee hawaasaa irratti daawwanneerra. Ka’umsi rakkoo sanas dhimmuma lafaati. Naannoo Gaambeellaafi Beenishaangulittis fincilli wal fakkaataan gaggeeffamaa tureera. Jaarsonni saba Hadiyyaa walgahii gochuudhaan ummata Oromoof gartummaa agarsiisun isaanii oduu guddaa ture. Yeroo dhihoo asittis walii galteen ummatoota kibbaafi Oromiyaa jiddutti jabaachaa dhufuun haala siyaasa egeree biyyattii kan eeru jechuun ni danda’ama. Walitti dhiheenyi ummata Oromoofi Amaaraa wal qixxummaafi wal kabajuu irratti bu’uureffates eegalamuun isaa waanuma argaa jirru. Hariiron kuni osoo kana dura eegalamee turee cunqursaafi gadadoon ummatarra gahaa ture durumayyuu hangana turuuf humna hin qabaatu ture.
Taaksileen Finfinnee guyyaaa tokkoof hojii dhaabuu gaggeessun isaanii mootummaa Wayyaaneef rifaatuu guddaa ture. Qabsoo Ummataa bal’aa as deemaa jiruuf mallattoo guddaadha. Isa shaakkalliitis ture. Bu’aan isaas ifaan ifatti mul’ateera. Wayyaanen haala hin barataminiin gaafii konkolaachistoota taaksitiif sa’aa 24 hin guunne keessatti deebii isaani deebisuun isaa fincilli ummataa Oromiyaa keessatti eegale akka naannolee birootti hin babal’anne sodaa qaburraa ka’uudhaani. Daldaltoonni TPLF deeggaran Oromiyaafi Naannoo Kibbaatirraa harka ofii gabaabbeffachuu eegalaniiru. Qabeenyaafi maallaqa isaanii finfinneetti kuufachuu eegalaniru. Yeroo ammaa kanattis maallaqa qaban gara Sharafa Alaatti geeddarataa jiraachun isaanis dhagahamaa jira. Haalli kuni ammas itti fufeetuma jira. Alaamuddiinis fincila kanarratti irratti xiyyeefatamee qabeenyi isaa barbadaa’aa jira. Boorana keessatti Horsiisni horii inni hojjachaa fii Iluu Abbaa booraa keessatti qonni shaayii haala wal fakkaatun ummataan barbadaa’eera.
Ummanni Tigraay rakkoon kuni dhalachuu akka danda’u durumaayyuu tilmaamee ture. Masfin Waldamaariyaam akka ibsanitti Samtonni TPLF manneen viillaa maqalee irratti ijaarataniif maqaa ‘’ Ganda Appaartaayidii’’ jedhee wayta itti moggasu sana, waan isin hojjachaa jirtan kana keessaa nuti ummanni Tigraay keessa hin jirru jechuu isaanii ifatti labsaa turuu isaanii ture. Ummatichi Dhiigarraa bilisa tahuu isaa labsaa ture. Tapha Afaan Amaaraa keessatti dur durii ajaaibaa yaadadhu tokkotu ture. Yeroo tokko Waraabessi tokko ilmaan isaatin walii galee harree tokko kuffise ( gonbise). Ergasii ijoollee isaa dhooggatee adda ofii harree sana nyaate. Wayta lafti barii’uuf jettu abbaan harree sanaa Eboo qabatee dhufe. Wayta kana ijoollen isaa isa baqachuu eegalte. Ijoollee koo na gattanii hin deeminaa naa dirmadhaa jedhee itti waywaate. Ilmaan sunis Abbaa keenna, Akkuma nyaatten fiigi jedhanii deebisaniif jedhama. Makmaaksi kuni aangawoota TPLTif fakkeenya guddaa ta’a jedhee abdadha. Ummanni tigraay namoota maqaa isatin daldalan kanaaf jecha balaaleffatamuus abaaramuus hin qabu. Daandileen akkasumaas warshaalen Tigraayitti ijaaraman jedhamanii leellifamanis hagas mara kan jedhanamanii miti. Osoo dimookraasifi bulchiinsi gaarin jiraatee naannoo Itiyoophiyaa hundattuu sanaa ol gochuun dandahamee bareeda ture.
Walumaa galatti qabsoo xumura gabrummaa ji’oota afran dabraniif gaggeeffame irraa hubachuun akka danda’ametti Qeerron Du’a tuffateera. Riqicha Sodaa gootummaan ce’eera. Balbala Callisaa cabseera. Taphni siyaasaa haalaan galeefii jira. Baay’inniifi jabinni isaanii ajaa’ibsiisaa ta’ee jira. Akka Filmii ‘’Dances with Wolves’’ jedhamu keessatti arginetti dhufiinsi Qeerroo akka Urjiiti. Calaqqisa Urjiitin samii gurraacha ifa uffisanii jiru. Callaqisa ifu kanas dhaamsuf tasumayyuu hin danda’amu. Walumaa galatti, dhufaatin Qeerroo kuni akka midhaan bade jedhanii osoo eegan margee laaliseetin wal fakkaata. Gama biraatin, Laga gibee cinaa Naacha riphe tokkotu ture. Naachin kuni hanga kuruphee bishaan dhuguuf dhufte qacam godhee liqimsutti waan nabseen jiru hin fakkaatu ture. Fincilli Oromiyaas isa kanaan wal fakkaata. Ummanni Oromoo galmaafii kaayoo isaa isa guddaatti saffisaan tarkaanfachaa jira. Jabina akka gaalaatiin qabsoo ufduratti dhiibaa jira. Kana hubachuuf immoo hayyuu siyaasaa yookin Oromoo tahuun nama hin barbaachisu.
‘’ Aangawoota Wayyaane waan haaraa uumame kana hubachuu dadhabanii oliif gadi raata’aniif waan tokko isaan yaadachiisu barbaada. Ummanni Oromoo dhumarratti Sodaa injifateera. Seenaa garagaraa irraa akka hubannutti immoo Ummata Sodaa injifate dhaabun hin danda’amu. Rakkoo akkanaa kana yeroo muraasaf dhaabun danda’amun ni mala , garuu guutumaan guututti awwaalun tasumayyuu hin danda’amu.’’
← DHIIFAMAMOO NAGEENYAA?
HIRPHAAN EENYYUU? →
2 thoughts on “SODAANIS NI INJIFATAMA!”	Alyana DeolAugust 23, 2016 at 2:39 amPermalink	Helpful ideas ! I was enlightened by the points – Does someone know where my business could locate a sample WA DoR Combined Excise Tax Return document to edit ?
Reply	Anne CoobeyAugust 23, 2016 at 7:42 amPermalink	My friend completed a fillable VAR Form 300 example at this site http://goo.gl/Rt2bsv